Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Ku: ESTV iyo Warbaahinta DDSI soo hela geedkan!
Ku: ESTV iyo Warbaahinta DDSI soo hela geedkan!
November 25, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Waxaa sanado ka hor caalamka lagu faafiyey in geed cusub oo aan caalamka intiisa kale ku oolin kana bixin uu ka buuxo Deegaanka Soomaalida laguna arkey gobolka Qoraxay. Dadka cilmiga dhirta barta ama ku takhasusay ayay lama filaan ku noqotey in geed tiro badan oo ku yaalla Deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan laga helin caalamka intiisa kale.
Geedkan ayaa la sheegey inuu ka baxo dhul gaadhaya 3100 KM ka badan oo ka tirsan deegaanka Soomaalida iyadoo aysan hadda ka hor jirin cid aragtay waxaana laga yaabaa inuu faaiidooyin badan leeyahay balse Saynisyahankii helay geedkan ayaa sheegey in hadda geedkan loo isticmaalo kaliya in la shito. Midkamid ah Saynisyahanada dalka Ingiriiska ayaa yidhi markii uu arkay warbixinta geedkan ” Waan ku wareerey markaan ogaadey in geed tiradaas leh haddana dherarkaas leh aan waligiis la arag”. Warbaahinta wax qorta cilmiga dhirta ayaa geedkan si aad ah wax uga qortey iyagoo dhamaantood sheegey iney suuro gal tahay iney jiri karaan dhir iyo xayawaan badan oo deegaanka ku qarsoon. Geedkan ayaa la sheegey inuu ka baxo dhambaca buuraha uuna dherar ahaan gaadhayo 20 feet kudhawaad 7m dherar ahaan uuna gaadhayo malaayiin geed oo daboola dhul baaaxad badan.
Khabiirkan daahfurey isla markaana soo heley geedkan ayaa sheegey in muddo 18sano ah uu gayigan Bariga Afrika uu ka raadinayay dhirta balse ay fajac ay amakaag ku noqotey in geed tira badan oo ah mid weyn laga helo waddankan. Geedkan ayaa loo bixiyey magac lagu diwaan galiyay oo ah ” Acacia Fumosa”. Waxaana magacan loo bixiyan sanadkii 2008. Waxaa suuro gal ah in deegaanka Soomaalida ay ka buuxaan mucjisooyin dunida oo dhanba ka yaabin lahaa dhanka geedaha iyo noolahaba balse wali maysan dhicin fursad lagu baadi goobo kheyraadka dalka. Iyagu ubixiye Magacaase inagu maxaan u naqaanaa geedkaas?
Haddaba qormadan waxaan usoo qaadanay in Dawladda Deegaanka iyo Telefeshinka ESTV iyo bahda saxaafaddaba in aan dib u xasuusino muhiimadda daahfurkani u leeyahay taariikhda deegaanka waxaana looga baahanyahay in xukuumaddu dhirta oo dhan daryeesho si khaas ahna u illaaliso geedkan aan caalamka intiisa laga aqoonin.
Waxaa kale oo xukuumadda Deegaanka gaar ahaan teleshinka ESTV laga sugayaa iney soo bandhigaan magaca geedka looga yaqaano waddanka iyo tirada geedka ayna inoo keydiyaan si aan tartamada caalamiga ah ee dhanka dhirta iyo kheyraadka uga qaybgalno. Waxaaba suura gal ah in geedkani leeyahay faaiido badan oo aynaan ogeyn.
Maaddaama oo deegaanka Soomaalidu maanta yahay mid aad uga nabdoon sidii sanado ka hor ayna jirto warbaahin maqal iyo muuqaal ah waxaa haboon in geedkaas iyo noocuu yahayba saxaafadda deegaanku ay soo bandhigto si gaar ah loo daryeelo.